Tari-dalana Toriteny Alahady 19 Febroary 2017 (Alahady faha-8 mialoha ny PASKA) – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika. Alahady faha VIII mialoha ny Paska ny Alahady faha 19 Febroary 2017 ho avy izao. Ny Jaona 12:34-43 no perikopa izay anjaratsika hotoriana manerana ny sahan’ny FLM amin’izany. Indro ary atolotra anareo ny tari-dalana momba izany. Mirary soa indrindra tompoko.
Ao anatin’ny famintinan’i Jaona ny fizarana voalohany amin’ny Filazantsara (Toko 1–12) izay antsoina hoe “Bokin’ny Famantarana” no misy ity texte izay anjarantsika ity, i.e., ao anatin’ ny fizarana izay iraketana ireo “Famantarana” na “asa mahagaga” samihafa izay nanambaran’i Jesosy tena amin’ny maha Zanak’ Andriamanitra mitondra fiainana ho an’izao tontolo izao Azy izany. Manaraka izany, manomboka amin’ny hoe “Dia hoy Jesosy taminy” ity texte ity, fehezanteny izay milaza amintsika fa mifamatotra amin’izay voalaza eo alohany izy ka tsy azo sarahana amin’izany ny fahazoana azy. Ny and. 31–34 àry dia iresahan’i Jesosy ny amin’ny hanandratana Azy eo amin’ny hazofijaliana, i.e., ny hahafatesany sy ny hevitr’izany ho an’izao tontolo izao: fitsarana izao tontolo izao kanefa koa fitaomany ny olona hanatona azy mba hananany ny fiainana mandrakizay. Ny tsy fahazoan’izay nihaino Azy momba izany fanambarany izany (vakio and. 34) no anton’ny fanazavany eto amin’ny texte izay anjarantsika.
Raha mitodika amin’ny texte àry isika dia toy izao no azo hanazavana azy:
Voalohany, ny and. 35 sy 36 dia mirazotra ka mifanazava, noho izany dia azo arafitra tahaka izao:
A. Mbola kely ihany no itoeran’ny mazava aminareo (and. 35a)
B. – Mandehàna raha mbola manana ny mazava ianareo,
– mba tsy hahatratra anareo ny maizina, fa izay mandeha amin’ny maizina dia tsy mahalala izay alehany (and. 35b)
B1. – Raha mbola manana ny mazava ianareo dia minòa ny mazava,
– mba ho tonga zanaky ny mazava ianareo (and 36a)
A1. Rehefa nilaza izany Jesosy dia niala ka niery azy (and. 36b).
Ny zavatra azontsika tsoahana avy amin’io firafitra io dia izao: ny hoe “mandehàna” (and. 35b) dia mitovy hevitra amin’ny hoe “minòa” (and. 36a) ary ny hoe “tsy hahatratra anareo ny maizina” (and. 35b) dia mitovy hevitra amin’ny hoe “ho tonga zanaky ny mazava ianareo” (and. 36a). Ny hoe “mazava” eto dia tsy hafa fa Jesosy tenany sy ny asany. Ny hoe “mbola kely ihany no itoeran’ny mazava aminareo” (and. 35 a) izay mira zotra amin’ny hoe “… niala ka niery azy (Jesosy)” (and. 36b) dia mifandray amin’ny and. 31–34 voalaza teo ambony, noho izany dia ilazan’i Jesosy ny fiantombohan’ ny absence-ny teo anivon’ny Jiosy izay hiafara mihitsy amin’ny fahafatesany tsy ho ela satria efa mizotra mankamin’izany ny diany izao. Izany fotoana fohy maha present an’i Jesosy eo anivony izany àry no iantsoany farany ny mpihaino Azy mba hinoan’izy ireo Azy sy ny asany ka hahatonga azy ireo hanana ny fiainana avy Aminy sy haha zanak’Andriamanitra azy ireo.
Araka ny and. 37, raha mbola teo aminy Jesosy, dia tsy nitondra azy ireo ho amin’ny finoana Azy ny presence-ny sy ireo famantarana na asa mahagaga rehetra izay nataony, i.e., mbola tsy nandray ny fiainana avy amin’i Jesosy araka izany koa izy ireo, mbola zanaky ny maizina izy ireo. Ho avy tsy ho ela izao ny fotoana izay hahafatesany, i.e., izay haha abscent tanteraka Azy eo anivony, noho izany vao maika hihalehibe izany tsy finoan’izy ireo Azy izany. Tsy absence-n’i Jesosy ihany no handrakofan’ny aizin’ny tsy finoana azy ireo fa ny tsy fahazoany koa ny hevitr’izany fahafatesany izany (ampitahao and. 34). Ny hoe “maizina” (and. 35b) eto dia manondro ny fahafatesana, ka ny fahafatesan’ny finoana izay hiteraka fahafatesana mandrakizay ho an’izay tsy mahalala ny hevitry ny fahafatesan’i Jesosy ho azy no tiany ambara eto.
Ny and. 37–43 no anehoan’i Jaona Mpanoratra ny Filazantsara ny fomban’izany fahafatesana izany: ny maty dia tsy andairan’inona n’inona intsony, ny masom-panahiny tsy hahita, ny fony ho mafy (fo vato) sns. Fitsarana ampiharin’Andriamanitra amin’izay rehetra tsy mino an’i Jesosy sy ny asa efa nataony ho azy sy ho an’ireo rehetra izay nitoriana ny Filazantsaran’ny hazofijalian’i Jesosy Kristy kanefa tsy nandray izany na nanao izany ho zavatra tsy misy vidiny noho fitiavana laza sy voninahitry ary ny tahotra ny fiarahamonina sy ny fomba jentilisa rehetra izay mamatotra azy izany. Hatrety ambonin’ny tany dia efa ampiharin’Andriamanitra amin’izay tsy mino izany fitsarany izany.
Hafatra fohy: Ry Havana, aza manjehy ny andro ho lava fa araraoty ny andronao sisa izay mbola ialan’i Jesosy nenina aminao mba handraisanao Azy sy ny asany teo amin’ny hazofijaliana amin’ny finoana eo amin’ny fiainanao rehetra dia ho tonga zanaky mazava koa ianao. Amena!
Misotra betsaka Pastora fa mahafinaritra ny fanazavana ny tenin’Andriamanitra.
Misaotra an’Andriamanitra noho ny fitiavany ka tsy mba reraka mampianatra antsika mba andeha araka ny sitrapony. Misaotra anao koa Pastora nanaiky ho fitaovana eo am-pelatanan’Andriamanitra hizara ny hafatra.
Ho Azy irery ny voninahitra !
Répondre à Pascal Raherimanana Annuler la réponse